Otu esi ele Formula 1 n'efu na 2021 | Androidsis
Aaron Rivas | 21/11/2021 09:33 | Emelitere ka 21/11/2021 09:35 | Ngwa gam akporo, gụgharia
La Formula 1 ma ọ bụ F1, dị ka a na-akpọkarị ya, ọ bụ asọmpi motorsport kacha mkpa ma ọ bụ asọmpi zuru ụwa ọnụ. Ọ bụghị maka ihe ọ bụla ka a maara ya dị ka eze nwanyị nke ụdị ụgbọ ala kachasị ọsọ ma ọ bụ asọmpi niile. Ọ bụ ya mere ọtụtụ nde ndị na-ekiri ya ji na-ekiri ya kwa afọ, ebe ọtụtụ narị nde na-ege ntị ma na telivishọn ma site n'ọnọ na mgbasa ozi pụrụ iche na Intanet.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado egwuregwu a ma na-amasị gị ịgbaso agbụrụ na ihe niile metụtara Formula 1, mana ị maghị otú na ebe ị ga-ahụ ya, ma ị chọghị ịkwụ ụgwọ ya, ebe a anyị na-agwa gị. otu esi ele F1 n'efu na 2021.
Nke a bụ ụfọdụ nhọrọ kacha mma ịhụ Formula 1. Nke mbụ, nke bụ DAZN, na-enye ụzọ iji. lelee asọmpi F1 na MotoGP n'efu ruo otu ọnwa. Nke abụọ, nke bụ Movistar +, anaghị enye ọrụ ahụ n'efu, ọbụlagodi nwa oge, mana n'otu ụzọ ahụ anyị na-etinye ya ebe ọ bụ usoro ọrụ ọzọ iji hụ F1 n'ụzọ iwu kwadoro.
DAZN bụ ikpo okwu ma ọ bụ ọrụ nkwanye ugwu nke nwere ma kpuchie ọtụtụ egwuregwu dị iche iche, gụnyere Formula 1, n'ezie. Nke a nwere, yana Movistar +, ikike ịgbasa F1 na-ebi ndụ na na-achọ, ya mere ọ bụ otu n'ime nhọrọ ndị bụ isi na-ekiri asọmpi ụgbọ ala mgbe ọ bụla ịchọrọ, yana otu n'ime ndị kasị mma na Spain na mba ọ bụla.
Ọ bụ ezie na ị ga-akwụ ụgwọ iji nweta ọdịnaya ya na ihe niile ọ ga-enye, dị ka a ga-asị na ọ bụ Netflix, Amazon Prime, Disney + ma ọ bụ ọrụ mgbasa ozi ọ bụla ọzọ. na-enye gị ohere ịhụ F1 n'efu na-emeghị nnukwu ihe.
Ma ị chọrọ ịhụ MotoGP, F1, basketball, baseball, football na ọbụna egwuregwu na ntụrụndụ dị ka darts ma ọ bụ, mgbe ha na-eme, Olympic Games, DAZN kwere nkwa na-enye gị a free ọnwa, na ruturu, ọ dị mma ịrịba ama, Ebe ọ bụ na, n'ajụjụ ọnụ, DAZN na-akwụ ụgwọ ma na-ana 9,99 euro kwa ọnwa na-enweghị adịgide adịgide, ma ọ bụ 99,99 euro kwa afọ, nke na njedebe na-asụgharị n'ime ihe karịrị 8 euro kwa ọnwa.
Ọ dị mma ugbu a ka ịhụ Formula 1 n'efu na DAZN ị ga-ewe ọrụ, nke bụ, dị ka anyị kwuru, 9,99 euro kwa ọnwa. Mgbe ahụ, tupu ngwụcha ọnwa, ị ga-akagbu ya. N'ụzọ dị otú a, a gaghị etinye ụgwọ ọ bụla nke na-ewepụ ego ma ọ bụ ụgwọ ego ahụ na kaadị kredit gị iji dekọọ ịkwụ ụgwọ ahụ. N'ezie, anyị na-ekwusi ike na a ghaghị ịkagbu ọrụ ahụ tupu njedebe nke ọnwa, n'ihi na, ma ọ bụghị ya, DAZN ga-ana 9,99 euro ndị a kpọtụrụ aha ... na egwuregwu nke ikpo okwu nwere inye.
N'aka nke ọzọ, ụzọ ịkwụ ụgwọ dị n'oge a na-ebipụta akụkọ a gụnyere iji ụzọ ndị a:
Kaadị kredit na debit (VISA, MasterCard na American Express).
Ịkwụ ụgwọ agbakwunyere n'ime ngwa Apple.
Iji Google Play akwụ ụgwọ.
Kaadị akwụgogoro ma ọ bụ koodu: A na-eji nke a iji zere ijikọ akaụntụ akụ ma ọ bụ kaadị. Ị nwere ike nweta ha na saịtị anụ ahụ dịka MediaMarkt, FNAC, LK Bitronic, Carrefour na Ụlọ Ahịa GAME. Ha dịkwa na nyiwe ịntanetị dịka Startselect, GAME, FNAC na Aliexpress.
N'otu aka ahụ, DAZN nwere ngwa ọrụ dị na gam akporo (site na Playlọ Ahịa Play) yana na iPhone iOS (site na App Store), yabụ. Ị nwere ike ịnụ ụtọ Formula 1 yana asọmpi dịka MotoGP site na mkpanaka gị, mbadamba, Smart TV na ihe onyonyo dakọtara na Chromecast. Site njikọ a Ị nwere ike ịbanye na Ụlọ Ahịa Ngwa ka ibudata ngwa ahụ. N'okpuru anyị na-ahapụ nke si Play Store maka gam akporo.
Obere oge, Movistar + tụfuru ikike ịgbasa ozi Formula 1 na asọmpi MotoGP. Ndị a bụ naanị DAZN, si otú a kwụsị ọchịchị Movistar + na Spain, bụ nke kwere ka ụlọ ọrụ a gosipụta ọdịnaya maka egwuregwu ịgba ọsọ ụgbọ ala na ọgba tum tum ndị a.
Otú ọ dị, ná mmalite afọ a, ma DAZN na Movistar + kwupụtara na ha ga-ekekọrịta ikike mgbasa ozi nke F1 na MotoGP ruo 2023. N'ụzọ dị otú a, ndị ọrụ nke abụọ nyiwe nwere ike ịhụ otu agbụrụ na ọdịnaya si ma egwuregwu nanị site n'ịnye ọrụ nke otu ma ọ bụ ọzọ n'elu ikpo okwu.
Nke a bụ ndepụta egwuregwu niile enwere ike ịhụ na Movistar +:
Formula 1 niile zuru oke ma na-ebi na ọwa DAZN F1.
Site na ọwa DAZN 1, DAZN 2, DAZN 3 na DAZN 4: Premier League, bọọlụ Copa del Rey, Turkish Airlines EuroLeague na MotoGP ™ World Cup.
Nkata: Njikọ Endesa na NBA naanị.
Nnukwu asọmpi Rugby.
GarageTV: raara onwe ya nye awa 24 maka mmemme metụtara ụgbọ ala.
Site na ọwa Movistar Golf: Nna-ukwu, Open British, US Open na PGA, European American Circuit, Golf Women na LPGA. Nweta na Movistar + Golf Club (Sekit kacha mma na Spain, Audi Movistar + Golf Tour).
N'aka nke ọzọ, ọ bụghị ngwugwu Movistar + niile na-enye ohere ịnweta egwuregwu DAZN na ọdịnaya F1. Ị nwere ike ilele F1 site na DAZN F1 ma ọ bụrụ na ị nwere ngwugwu Fusion ndị a site na Movistar +:
Fusion Total Plus na usoro ya
Fusion + adịchaghị
Fusion + mkpokọta adịchaghị
Site na ngwugwu Movistar + TV ndị a, ị ga-enwekwa DAZN gụnyere:
Premium nwere Disney +
N'ime ndị niile a kpọtụrụ aha, Ndị na-enye mkpuchi F1 na MotoGP bụ ngwugwu nhọrọ igwe onyonyo na egwuregwu., ọ bụrụ na ịchọrọ ime na-enweghị ndị ọzọ. Nke mbụ na-efu ihe dị ka euro 10 kwa ọnwa mgbakwunye, ebe nke abụọ, nke na-ekpuchi egwuregwu ndị ọzọ, nwere ọnụ ahịa euro 15. N'ezie, iji were ha n'ọrụ ị ga-abụ onye ahịa Fusion.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Otu esi ele Formula 1 n'efu na 2021